Semalt: Ahoana ny fijanonana ny Stop WordPress Trackback & amp; Pingback Spam
Semalt: Ahoana ny fijanonana ny Stop WordPress Trackback & Pingback Spam
Trackbacks sy pingbacks dia fomba tena tsara ho an'ireo mpitory sy mpitoraka bilaogy mba hizara hevi-baovao amin'ny mpankafy azy ireo ary hanohy ny resaka sy ny dikany amin'ny mpamaky sy mpanaraka amin'ny alàlan'ny fanoratany. Ny valiny dia heverina ho fanehoan-kevitra avy amin'ny WordPress. Ohatra, raha misy tranokala mampiasa rindrambaiko samihafa sy rohy amin'ny lahatsoratrao, dia handefa hafatra ho azy manokana izy ireo mba hampahafantaranao ny momba ny asany. Amin'ny lafiny hafa, pingbacks dia afa-tsy amin'ny WordPress. Midika izany fa afaka mampifandray amin'ny lahatsoratra na lahatsoratra amin'ny blôginao ny olona iray raha mampiasa WordPress ianao amin'ny maha-rafitra fototra ny fitantanana ny votoatiny. Amin'izany tranga izany, ny tranonkala roa dia tokony mamela pingbacks mba ahafahana manoratra tsara ny lahatsoratra. Mbola maro ny mpitsikilo manohy mitsambikina ny trackbacks sy ny pingbacks isan'andro.
Tsy mila manahy ianao satria i Frank Abagnale, manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , dia manome fomba tsotra hanalavirana azy ireo sy hanakana azy ireo amin'ny ho avy.
Ny Topsy Blocker dia miasa amin'ny fomba samihafa, ary mikendry ny handinika ireo valiny sy pingbacks izay raisinao isan'andro. Manamarina ihany koa ny fanehoan-kevitrao ary manala ireo loharano tsy ara-dalàna toy ny topsy..fr. Raha sendra misy tranonkala toy izany, ny mpitsidika sy ny pingbacks dia apetraka ho toy ny spam automatique. Ny ilainao dia ny mametraka sy mavitrika ity fitaovana ity mba hahazoana antoka fa ny tranokalanao dia mijanona amin'ny tsikombakomba spam, pingbacks, ary trackbacks.
Tsara ny miteny fa Antispam Bee dia safidy malaza sy mahery vaika amin'ny mpitoraka bilaogy WordPress. Manana 200.000 mahery mahery vaika izy io ary ny hany safidy hanamarinana ny valiny sy pingbacks mora foana. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia manamarina ny fanehoan-kevitra tsara indrindra ary manala ireo fanamarihana tsy marina avy amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny mametraka izany avy amin'ny safidy "Settings> Antispam Bee", ary ny fandaharana dia maimaim-poana. Azonao atao ny manova azy ireo amin'ny fotoana rehetra, mifanaraka amin'ny fepetra takinao sy ny nakan'ny blôgy. Na izany aza, ny votoatin'ny fanamarihanao dia ampy handehanana raha manana bilaogy manokana na tranonkala fanombohana ianao.
WP-SpamShield dia programa miavaka sy mahavariana tokony hoeritreretinao satria manampy amin'ny fanesorana pingbacks sy trackbacks. Mametaka ny Captcha eo amin'ny tranokalanao izy ary mandefa ireo mpitsidika rehetra hiditra ao amin'izany Captcha izany ho an'ny tanjona fanamarinana. Na izany aza, ny sasany amin'ireo mpamaky anao dia mety tsy resy lahatra amin'io fizotran'ny fanamarinana io mba ahafahanao manitsy izany araka izany. Ity rafitra ity dia tsy hanakana bots izay hitsikilo ny blôginao na tranokala. Ho solafaka kosa dia esorinao ireo fanamarihana spam, ary ity plugin ity dia miasa tsara toy ny firewall. Ny fanamarihana Spam dia misakana ny tenany, fa afaka manamboatra ny sehatra avy amin'ny faritra admin ianao ary tsindrio ny safidy Settings> WP-SpamShield.
Famaranana - Manamarika ny tsikera ho toy ny spam raha toa ka ahitana ny teny maintin'ny mainty mainty
Ankoatr'ireo fomba ireo, ny WordPress dia mamela antsika hanamarina ireo fanehoan-kevitra, pingbacks, ary trackbacks mora vidy mba ahafahantsika manamarika azy ireny raha toa ka misy zavatra tsy misy dikany. Ny fanehoan-kevitra rehetra misy ny teny na fehezanteny dia tokony hotakiana sy hesorina amin'ny hafatrao avy hatrany. Na dia tsy azonao aza ny fampandrenesana, dia alefaso fotsiny ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny faritra Admin ianao Source .